Edere site Tranquillus | June 27, 2020 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Ọ bụghị ihe siri ike. Kwadebe Ọrụ Mgbakwunye Ọrụ (PTP). Goodzọ dị mma iji gaa ọzụzụ na-akwụghị ụgwọ dime. Onye otu ibe ya jiri oge eji eme ihe. N’oge a, ọ bụ gị na-elekọta faịlụ ya. Ọ bụ ọrụ ebube nke telegram. Mgbe ọ laghachitere, ekele maka nka ọhụụ. Ọ bụ ya bụ onye jizi ọrụ gị. Ọnọdụ a dị ịtụnanya na-ewute gị nke ukwuu. Did gubathihi oge gi n'oge ihe siri ike. Ayi echefuola gi.
Etu esi akwadebe Ntugharị Mgbakwunye Ọkachamara?
Think chere na oge eruola ka imezi nka. Ozo karia igbanwe ngalaba. Agbanyeghị, kedu ihe ị ga-eme, jikere maka asọmpi ma ọ bụ nyocha. Ka e wee mee ihe niile dịka iwu si dị. Ekwesịrị ịgwa ndị were gị n'ọrụ ihe omume gị tupu ịmalite ọzụzụ ahụ. Iji rite uru na Oge Ọzụzụ Ndị Ozi mbụ (CIF). A na-akpọ Ọrụ Ọkpụkpụ Ọhụụ Ọkachamara. Kwesiri ịkwanyere a ọnụọgụ nke ọnọdụ.
Kedu oge usoro ọnọdụ ga-asọpụrụ iji gaa ọzụzụ?
Dabere na ikpe gị, usoro oge ị ga-akwanyere ùgwù abụghị otu.
Ka e were ya na ịnọ na CDI na-adịgide adịgide ma ọ bụ nke nwa oge.
Ikwesiri iziga akwụkwọ ozi gị opekata mpe ọnwa 4 tupu mmalite ọzụzụ ahụ. Ọ bụrụ na ọzụzụ gị gbatịrị ruo ọnwa isii ma ọ bụ karịa.
Bụrụ na ọzụzụ nke ihe na-erughị ọnwa 6 ma ọ bụ ọkara-oge. Mgbe ọnwa abụọ opekempe ga-ezu.
Ugbu a, were ya na ị nọ nkwekọrịta a kara aka.
A ga-arịọrịrị arịrịọ gị n'oge oge nkwekọrịta gị. Site na ịkwanyere oge nke ọnwa 3.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ọzụzụ mgbe ngwụcha nkwekọrịta ahụ gachara. N’ezie onweghi arịrịọ ịchọrọ ịrịọ onye were gị n’ọrụ. Agbanyeghị, arịrịọ gị ga-erurịrị nke a CPIR mgbe ị ka nọ n'okpuru nkwekọrịta. Ma nke a maka ọzụzụ nke ga-amalite ruo ọnwa isii mgbe ngwụcha nke nkwekọrịta gị gasịrị.
Ọ bụrụ na ịnọghị na nkwekọrịta a kara aka, mana onye ọrụ nwa oge. A ga-elebara ọrụ gị na-ahụ maka ọrụ nwa oge na-ewe gị n'ọrụ anya
Enwere ike ịjụ arịrịọ m?
Na CDI, onye were gị n'ọrụ nwere opekata mpe otu ọnwa iji nabata gị. Enweghị nzaghachi sitere n'aka ya. A na-atụle arịrịọ gị. Dabere na natara arịrịọ ahụ n'oge. I meechaa, arịrịọ gị ezuola ma ị ga-enwe ọkwa tozuru etozu (ọnwa 24).
Onye were gị n’ọrụ nwekwara ike ikpebi igbu oge maka ọzụzụ gị. Enwere ike ịkpọ ihe atọ kpatara.
Work na-arụ ọrụ na nhazi nke ndị ọrụ 100 ma ọ bụ karịa. 2% nke ndị ọrụ nọrịị na Ọkachamara Mgbanwe Ọgwụ. Ga-echere oge gị. Na-etinye na nchere ndepụta.
Na-arụ ọrụ n'ime ihe na-erughị ndị ọrụ 100. Otu onye otu nọ na PTP. Ga-echere ya ka ọ lọta ọzụzụ. Naanị otu onye n'ime otu oge ahụ nwere ike ịnọ na PTP.
Enweghị ike gị nwere ike bụrụ ihe na-emebi ọrụ azụmaahịa na-aga nke ọma. Maka ebumnuche ọrụ, arịrịọ gị nwere ike yigharia rue ọnwa 9.
Ntị ọnwa 9 site na ụbọchị mmalite nke ọzụzụ ahụ, nke a ga-ahazi mgbe ọpụpụ. Ma site na ụbọchị ị rịọrọ. N’okwu a, egbula oge. Ziga ozi ọhụrụ na ụbọchị ọhụụ.
Dịka onye ọrụ nwa oge, ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ nwa oge enweghị ike ịkwụsị ọrụ gị. Ma ọ bụrụ na mmalite nke ọzụzụ na arịrịọ gị rutere n'oge otu ozi ahụ. Ma na nke a kwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ọzụzụ maka ihe karịrị awa 1200. Ma ọ bụ iji nweta iru eru ọhụrụ. Ọzụzụ enweghị ike yigharịrị.
GỤỌ Zọ kachasị mma iji dee akwụkwọ ozi ọkachamara nke ọma
Akwụkwọ ozi kọwaara onye were gị n'ọrụ maka Ọrụ Ntugharị Ọkachamara gị
Ekwesịrị izipu ozi gị site na akwụkwọ ozi edebanyere na nnabata nke nnata. Nke a ga - echekwa ọtụtụ nsogbu. Ọ ga-enwerịrị ọtụtụ ozi dị mkpa:
Datebọchị ọzụzụ na oge ọzụzụ ahụ.
Aha na ọdịnaya nke ọzụzụ a.
Nkwupụta kọntaktị na aha ụlọ ọrụ na-enye ọzụzụ a.
Ozugbo enwetara nkwekọrịta izizi nke onye isi gị. Can nwere ike lekọta akwụkwọ ozi a ga-agwa ya na ngalaba ọrụ nkwenye maka ịnweta ego.
Ihe atụ atụ nke arịrịọ maka Onye Ọrụ Mgbanwe Ọkachamara
Echefula ịkọwapụta na ị na-arịọ arịrịọ gị. Dabere na ịchọta ọnọdụ n'ime nzukọ ọzụzụ. Na nnabata nke itinye ego maka oru ngo a site na CPIR nke Transition Pro na mpaghara gi. Nke a ga - eme ka ị nwee ike ịnọ n ’ọwa gị, a bụrụ na ego anaghị akwụ gị.
Aha nna ikpeazụ
(Aha Ụlọ Ọrụ)
Maka nlebara anya nke (Sir, Madam)
Na (Obodo), na (ụbọchị)
Isiokwu: Arịrịọ maka ezumike nke ezumike na ọnọdụ nke a
Ntugharị Ọkpụkpụ Ọkachamara
Onye na-arụ ọrụ na otu anyị ruo afọ 10 ugbu a. Enwere m ọrụ maka ijikwa akụrụngwa IT anyị. Agbanyeghi na okwa m, abum onye oru ntinye data.
Mgbe ogologo oge a gachara. Enwere m mmetụta na m kwesịrị itinye aka na ọzụzụ iru eru iji meziwanye onwe m. Ana m atụ anya ịgbanwe ọnọdụ m.
O bu na mmuo a ka mhoro ozuzu “Computer Assistant Technician”. Site na " Aha na adreesị nke nzukọ ọzụzụ »Na nkwekọ zuru oke na Ọrụ Mgbanwe Ọkachamara m.
Ọzụzụ a ga - amalite site na 30/11/2020 ruo 02/02/2021 ruo oge 168. Ya mere enwere m nsọpụrụ, site na akwụkwọ ozi a, ịrịọ gị maka ezumike ezumike n'oge a.
Ana m arịọ arịrịọ a maka nkwenye nke nnabata m site na nzukọ ọzụzụ na ego nke ọrụ m site na CPIR nke Transition Pro " Aha nke Mpaghara gị ".
Ana m ekele gị tupu ị na-elebara arịrịọ m anya. Ma a ka ga-ekwu maka ya. Biko nabata (Sir, Madam) maka nzi ekele m.
GỤỌ Chọsie ike maka arụmọrụ naanị site na ịde ihe!
Download "pdị ihe atụ nke arịrịọ maka Translọ Ọrụ Mgbasa Ọkachamara"	sample-ụdị-nke-arịọ-for-a-ọkachamara-transition-project.docx – Ebudata ugboro 507 – 13 KB
Oru Ọrụ Mgbanwe Ọkachamara: Mail Mail Ọnwa Abụọ 13, 2022Tranquillus
gara agaMụta asụsụ Russian n'efu na ngwa ngwa
-esonụAtụmatụ mmepe dị ka aka ga-esi dị.